ကြာရိုးလေး ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး - Hello Sayarwon
ဟင်းခါးလေးပဲချက်သောက်သောက်၊ ချဉ်ရည်ဟင်းပဲ ချက်ချက် အဆင်ပြေပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့ ကြာရိုးလေးကို ကြိုက်တဲ့ သူလေးတွေရှိလား။ လက်သုပ်စုံလေး လုပ်စားရင်း ကြာရိုးဟင်းခါး ပူပူလေးသောက်ရတာ တော်တော်လေး အရသာ ရှိပါတယ်။ ဒီလို စားကောင်းပြီး ခံတွင်းတွေ့တဲ့ ကြာရိုးလေးက ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူပြုလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား………….
ကြာရိုးဆိုတာ ကြာပန်းအောက်မှာပါတဲ့ အရိုးပွပွလေးပါ။ နီညိုရောင်လေးရှိပြီး ခပ်ပွပွရိုးတံလေးကို အရွယ်တော်လေးတွေ တုံးပြီး ဘေးနားက အမျှင်လေးတွေကို သင်ပြီး ချက်စားလို့ ရပါတယ်။
ကြာရိုးမှာ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓာတ် နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ်က အရိုးတွေကို သန်မာစေပြီး အရိုးသိပ်သည်းဆ မြင့်စေနိုင်သလို နှလုံးကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေရတဲ့ သံဓာတ် ဟီမိုဂလိုဘင်တိုးစေပြီး သွေးအားနည်းတာမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုက အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေပြီး ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။
ကြာရိုးလေးတွေ ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး
ကြာရိုးလေးတွေက အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝတာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို အထောက်အကူပြုနိုင်သလို ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တတ်သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
ကြာရိုးလေးရဲ့ နောက်ထပ် ကျန်းမာရေးအာနိသင်တစ်ခုကတော့ နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တာပါ။ ကယ်လ်ဆီယမ် ပါဝင်နေမှုက နှလုံးကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံး အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ် ကြွယ်ဝမှုက အရိုးတွေကို သန်မာစေပြီး အရိုးသိပ်သည်းဆကို ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ကြာရိုးက ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်ကြွယ်ဝသလို အမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ tryptophan ကြွယ်ဝစွာပါဝင် နေတာကြောင့် ဆဲလ်တွေကို ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေကြောင့် ဆဲလ်တွေ မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ သွေးချို ထိန်းညှိပေးတယ်
ပိုတက်ဆီယမ် ကြွယ်ဝမှုက သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးသလို သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဆီးချိုရှိသူတွေရော သွေးတိုးရှိသူတွေပါ စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေမှုက ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ မကူးစက်စေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းချင်သူတိုင်း စားပေးသင့်ပါတယ်။
ဗီတာမင် C ပါဝင်မှုမြင့်တယ်ဆိုတာက ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်ကြွယ်ဝတဲ့ သဘောပါ။ ဒီလို ကြွယ်ဝမှုကပဲ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးမှာပါ။ ကော်လာဂျင်ထွက်ရှိမှုကို ကောင်းစေ နိုင်တာကြောင့် အရေပြားနဲ့ဆံသားကို ကျန်းမာစေနိုင်မှာပါ။ ကော့ပါးကြွယ်ဝမှုက ဆံသား ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
ကြာရိုးက အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတယ်၊ ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတယ်။ အာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝမှုကြောင့် ကြာရိုးက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။
ကြာရိုးမှာ ဗီတာမင် B၊ နီကာစင်၊ ဖောလိတ်၊ သီရာမင်း၊ ဗီတာမင် B6 နဲ့ Pantothenic acid တို့ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းစေပြီး သတိမေ့တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာကစလို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပါ ပြေလျော့စေပါတယ်။ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေဖို့ အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးပါတယ်။
အရသာရှိရှိ ကြာရိုးဟင်းခါးလေးသောက်လို့ ဒီအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရယူလိုက်ရအောင်လား…………….
Benefits of Lotus Stem https://oureverydaylife.com/547177-benefits-of-lotus-stem.html Accessed Date 8 April 2020
10 Health Benefits of Lotus Stem & its Side Effects https://www.epainassist.com/diet-and-nutrition/lotus-stem Accessed Date 8 April 2020